သတ္တု detector (JT-200) မှတဆင့်မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှု Walk China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:လုံခြုံရေးသတ္တု detectors မှတဆင့် Walk,သတ္တု Detector မှတဆင့်အိတ်ဆောင်လမ်းလျှောက်,သံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာမှတဆင့် Walk
Home > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk > Checkpiont သတ္တု Detector > သတ္တု detector (JT-200) မှတဆင့်မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှု Walk
အလင်းအိမ်နှင့်အတူ6ဇုန် - ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector
ဒါကကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်ရှောက်သွားနိုင်မယ့်တံခါးကိုပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုအပေါ်နှစ်ခုကော်လံနှိုးဆော်သံက high-Brightness ကို LED ညွှန်ပြချက်ဆီမီးခွက်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း, ထိုလူမီနီယံအလွိုင်းတစ်ကော်လံအလင်းဘားအဖြစ်အသုံးပြုသည်ကို၎င်း, နှိုးဆော်သံ၏အနေအထားကိုတိုက်ရိုက်ပြသသည်, အသွင်အပြင်ကြော့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကလျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ပြင်တံခါးဝ၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, နဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်အီလက်ထရောနစ်, တိကျစွာထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောသတ္တုထုတ်ကုန်များအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်အိတ်ကိုအတွက်ဝှက်ထားသောသတ္တုသို့မဟုတ်သတ္တုပါဝင်သောအရာဝတ္ထု, detect နိုင်သည့်သတ္တုအရာဝတ္ထုတစ်ခုနှိုးဆော်သံ device ကိုထုတ်ပေးသည်ကိုသယ်ဆောင်လာသောအခါနေသည် ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားသတ္တုပါဝင်သောပစ္စည်းများ။ ကဲ့သို့သောမိုးလုံလေလုံစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ပစ္စည်းများ, etc နှင့်တိကျစွာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတ္တုတ္ထုများ၏တိကျသောတည်နေရာ, အဓိကအားဖြင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောလုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ထိရောက်သော tool ကို, Anti-ခိုးမှုနှင့်မှောင်ခိုဖြစ်ပါသည်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုငျသညျ, ပြပွဲခန်းမ, etc, အတုခိုးမှုစစ်ဆေးရေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲ, အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူ။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်သတ္တု Detector, လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector, ခုံးသတ္တု detector ။
1. Partition ခွဲ positioning ကို, အသံများနှင့်ကော်လံတစ်ပြိုင်နက်နှိုးဆော်သံ: ခြောက်ထပ်ထောက်လှမ်းဒေသများတိကျစွာသတ္တုတ္ထု၏တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်၏မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု LED နှိုးဆော်သံညွှန်းကိန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
သေလွန်သောသူတို့သည်ကြီးစွန်း၏ထောက်လှမ်းကာကွယ်တားဆီးဖို့လေးယောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများ, အသံဖမ်း,: 2, 360o All-ပတ်ပတ်လည်ထောက်လှမ်း။
3, sensitivity ကို Adjustments: တစ်ခုချင်းစီဧရိယာထိုကဲ့သို့သောခါးပတ်ခေါင်း, ဇစ်နှင့်အခြားအရာဝတ္ထုအဖြစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖယ်ရန်, 0-99 အတွက်မဆိုညှိနှိုင်းမှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, ချိန်ညှိ sensitivity ကို 100 အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ သတ္တု detector ၌ကျင်လည်။
4, မိုက်ခရိုဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ, ခိုင်မာတဲ့ Anti-်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စွမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလိုအလျောက်ဖြတ်သန်းလူမျိုး၏နံပါတ်နှင့်နှိုးစက်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်လို့ရပါတယ်။
5 စီးဆင်းလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသို့မဟုတ် (40CM ၏နိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးနှင့်အတူ) လျှပ်စစ်လိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထောက်လှမ်းတံခါးကို၏တူညီသောအမျိုးအစားမျိုးစုံမော်ဒယ်များ, ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့နိုင်ပါသည်။ 6. Password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း: အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင် parameters တွေကို parameters များကိုပြုပြင်မွမ်းမံထံမှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်များကာကွယ်တားဆီးဖို့ password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ function ရှိသည်။
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော 7, ချွေနှင့်လက်တွေ့, စုဝေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။
အဆိုပါ pacemaker wearer, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, ရုပ်ရှင်နဲ့သံလိုက်အသံဖမ်းပစ္စည်းများရန်မပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု: EMC လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ 8, ။
9, OEM, တံခါးဘောင်သတ္တု Detector, မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံတံခါးကိုဘောင်သတ္တု detector နိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း II ကို။ နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
1. ထောက်လှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း: 100-Level sensitivity ကိုညှိနှိုင်းမှု, ကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်။
40 ကျော်ကလူ / မိနစ်: 2, ပုဂ္ဂိုလ်များနှုန်းကိုဖြတ်သန်းရတယ်။
3. Power ကထောက်ပံ့ရေး: 220V AC အ, 50 / 60Hz ။
4, ပါဝါစားသုံးမှု: 35W ။
5, အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်: -10 ° C မှ ~ 45 ° C မှ 95% RH အ≤။
6, ရုပ်သံလိုင်းအရွယ်အစား: 200 (အမြင့်ဆုံး) * 70 (အကျယ်) * 50 (နက်ရှိုင်း) CM
7, ရှုထောင်: 222 (အမြင့်ဆုံး) * 81 (အကျယ်) * 50 (နက်ရှိုင်း) CM
8, အထုပ်အရွယ်အစား: တံခါးကို panel ကို: 230 * 60 * 25CM (2 / သေတ္တာ)
အဓိကကိုယ်ထည်: * 55 78 * 28CM (1 / သေတ္တာ) ။
9, အသားတင်အလေးချိန်: 48kg / set စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 55kg / set ကို
လုံခြုံရေးသတ္တု detectors မှတဆင့် Walk သတ္တု Detector မှတဆင့်အိတ်ဆောင်လမ်းလျှောက် သံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာမှတဆင့် Walk လုံခြုံရေးအဘို့အသတ္တု Detector မှတဆင့် Walk လုံခြုံရေးသတ္တု detectors စျေး လုံခြုံရေးစကန်နာမှတဆင့် Walk လုံခြုံရေးသတ္တု Detector စျေး နှိုးစက်အတွက်သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk